ကမ်းခြေသွားရင် ဘယ်လိုအဝတ်စားမျိုးတွေ ဆောင်သွားသင့်လဲ? – FemaleWear.net
ကမ်းခြေသွားရင် ဘယ်လိုအဝတ်စားမျိုးတွေ ဆောင်သွားသင့်လဲ?
အားလက်ရက်တွေမှာ မိသားစုနဲ့ဖြစ်ဖြစ် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ဖြစ်ဖြစ် ချစ်သူနဲ့ဖြစ်ဖြစ် ကမ်းခြေသွားဖို့ အစီစဉ်တွေဆွဲထားရဲ့လား? ကမ်းခြေသွားရင်ဘယ်လို style ဝတ်ရမလဲဆိုတာကိုရော စဉ်စားရခက်နေလား?
ကမ်းခြေသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးအဝတ်စားတွေကို ဆောင်သွားရင်အကောင်းဆုံးပါ။ ဒီလိုနေရာမျိုးမှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကဲကြခုန်ကြမှာ ဖြစ်တဲ့ကြောင့် ပေါ့ပါးတဲ့ အဝတ်စားဖြစ်ဖို့လိုသလို ရေထဲဆင်းလိုက်တက်လိုက် လုပ်ကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လည်း အရမ်းထူတဲ့အဝတ်စားမျိုး မဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ကမ်းခြေအတွက် ဘယ်လိုအဝတ်စားမျိုးတွေကို ရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်သလဲဆိုရင်တော့ –
ဂါဝန်အဖြူလေးတွေကတော့ ကမ်းခြေနဲ့အလိုက်အဖက်ဆုံးပေါ့။ ကမ်းခြေရူ့ခင်းမှာ ဓါတ်ပုံရိုက်လို့ လှသလို လေထဲမှာလွင့်ပြီး အရမ်းကြီးမထူတဲ့အတွက် ရေစိုရင်လည်း အမြန်ခြောက်တယ်။ အဖြူမကြိုက်တဲ့သူကျ တခြားအလွင့်ဂါဝန်လေးတွေ ဝတ်ပြီး လန်းလို့ရတယ်နော်။
နောက်တစ်မျိုးကတော့ ရေကူးဝတ်စုံပါ။ ကမ်းခြေရောက်ပြီး ရေကူးဝတ်စုံလှလှလေးနဲ့ ဓာတ်ပုံလှလှလေးတွေ မရိုက်ခဲ့ရရင် ဘယ်တန်မလဲနော်။ ရေကူးဝတ်စုံအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အတွက် bikini မဝတ်ရဲတဲ့သူတွေအတွက်လည်း လုံလုံခြုံခြုံဖြစ်တဲ့ ရေကူးဝတ်စုံတွေ ရှိတဲ့အတွက် မပါမဖြစ်သယ်သွားရမယ့်ထဲမှာ ရေကူးဝတ်စုံလည်း ပါဝင်ပါသေးတယ်။
နောက်ဆုံးမပါမဖြစ်ထဲမှာ ပုဝါနဲ့ ဦးထုပ်ကလည်း အဓိကပါ။ ကမ်းခြေမှာ ပုဝါလေးလွင့်ပြီး ပဲပေးရတဲ့ feeling နဲ့ ဦးထုတ်လှလှလေး (သို့) ဦးထုပ်အစား flower crown လေးဆောင်းပြီး ပဲပေးရတဲ့ feeling ကဘာနဲ့မှမလဲနိုင်ပါဘူးနော်။ ကမ်းခြေရဲ့အလှနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ ပစ္စည်းတွေလည်း ဖြစ်တဲ့အတွက် ကမ်းခြေသွားရင် ထည့်သွားရမယ့်ပစ္စည်းလေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့နုပျိုငယ်ရွယ်မှုတွေဆိုတာ ဓါတ်ပုံတွေထဲမှာဘဲ ပြန်ရှာမှတွေ့နိုင်တာဖြစ်လို့ ကမ်းခြေသွားရင် ဒီပစ္စည်းလေးတွေကို ဆောင်သွားပြီး အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံလှလှလေးတွေရိုက်ရင်း ကိုယ့်ချစ်ရတဲ့သူတွေကို အပျော်လေးတွေ မျှဝေလိုက်ရအောင်နော်။
Tags: beach, comfortable, flower crown, hat, Skirts
အရမ်းကြီးမအေးသေးတဲ့ ဆောင်းရာသီအတွက် ခပ်မိုက်မိုက် Fashion လေးရွေးချယ်ကြည့်မယ်…
ZARA brand ရဲ့ မကြာသေးခင်က ကြုံတွေ့ခဲ့ရသော အခက်အခဲများ